Ilay Vehivavy Raqqa Miatrika Irery Ny Fanjakana Islamika ao Iraka Sy Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2013 5:17 GMT
Ity lahatsoratra ity dia niaraha-nanoratra tamin'i Syria Untold.
Tamin'ny fiandohan'ny fitroarana manohitra ny fitondran'i Bashar al-Assad tamin'ny taona 2011, ilay mpampianatra, Suad Nofal, no anisan'ireo mpanao fihetsiketsehana voalohany nidina teny an-dalambe tao Raqqa, tanàndehibe ao afovoany avaratr'i Syria miorina ao amorontsiraka avaratr'i Eofrata, 160 km eo ho eo miala ao atsinanan'i Alep. Nandray anjara tamin'ireo fihetsiketsehana voalohany manohitra ny Fanjakana Islamika ao Iraka sy Syria (FIIS), vondrona djihadista nibodo ny faritra tsy fehezin'ny fitondrana ary nametraka ny lalàny manokana hoan'ireo mponina ao, ihany koa izy. Raha tapa-kevitra ireo mpikatroka ao Raqqa fa mampidi-doza loatra ny mamory vahoaka ao amin'ny foiben'ny FIIS, dia tapa-kevitra ny hanao fihetsiketsehana irery kosa i Nofal, ary nanjary vehivavy-tokana manao fihetsiketsehana sy mariky ny fitroarana Syriana.
Suad Nofal, voahodidin'ireo sorabaventiny. Loharano: Syria Untold
Vehivavy tokana manao fihetsiketsehana
Nandeha irery tamin'ny revolisionany manokana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fitroarana i Nofal, izay nahazo mari-pahaizana momba ny Fampianarana tamin'ny taona 2006. Niatrika irery ny fitondrana izy mba hifampiraharaha amin'ireo vondrona mahery fihetsika niezaka nanararaotra ny fahabangana teo amin'ny fitondrana, ary nisedra olana tamin'ireo fianakaviany manokana ihany koa izay tsy nankatò ny fikatrohana iantsorohany.
Raha nanontanian'ny Syria Untold mikasika ny fiantraikan'ny fikatrohany amin'ny fianakaviany izy, dia hoy i Nofal namaly:
Nilaza ahy ireo fianakaviako mba hijanona amin'ny fikatrohako aho ary nilaza ihany koa izy ireo fa tsy hiala amiko raha misy zavatra mihatra amin'izy ireo. Eny, niahiahy fatratra tamin'izany aho, kanefa mila antsika rehetra i Syria ankehitriny. Ahoana no ilaozantsika ny firenentsika raha mila antsika mafy izy amin'izao fotoana izao?
Toa vonona tsy hiala an-daharana anefa izy ary manohy mandrangaranga ireo afisy namboariny tao an-trano eo anoloan'ny foiben'ny FIIS sy eny an-dalambe ary eny an-tsena ao Raqqa. Mivantana sy mitsikera tanteraka ireo hafatra nosoratany, tahaka ny hoe “ireo olona mendri-kaja no nahatonga ny revolisiona anay, ary nangalarin'ireo mpangalatra izany”, “Avoahay ireo gadra” sy ny hoe “Taiza ianareo raha nitranga ny heloka tao Ghouta ? Matory ao amin'ny lapanareo ?” (Ghouta dia faritra ambanivohitra ao Damas izay misy ireo mponina nijaly tamin'ny fanafihana tamin'ny fitaovam-piadiana simika tamin'ny volana Aogositra 2013, niteraka fahafatesan'olo-tsotra an-jatony izay ankizy avokoa ny ankamaroany.
Afisy hafa kosa mandefa hafatra mazava hoan'ireo mampiasa ny fivavahana hoentina hampahoriana vahoaka :
“Mpanota ireo miozolomana mandatsa-drà amin'ireo miozolomana”, “Ny fitondrana mpamono olona no fahavalonay , fa tsy ny vahoaka”, sy ny hoe “Aza miresaka be momba ny fivavahana, fa asehoy anay amin'ny alalan'ny fitondra-tena mendrika, fihantrana, sy ny asa soa aloha ny fivavahanareo.”
Raha nanontaniana momba ny FIIS izy dia nilaza fa tsy misy fahasamihafana amin'ny fitondran'i Assad izay niaretan'izy ireo hatry ny ela ireo vondrona ireo.
“Mandoro fiangonana izy ireo, mitifitra olona, ary mametraka ny lalàny amin'ireo vahoaka, inona no mahasamihafa an'izany amin'ny fitondrana?”
Suad Nofal miaraka amin'ny ankizy kely iray sy ny afisiny tao Raqqa. Loharana: pejy Facebook-n'i Suad Nofal
“Tsy te-handao ny tanànako aho”
Araka ny efa notaterinay teo aloha tao amin'ny Syria Untold, nivonona tamin'ny fananganana saina maintin'ny vondrona ny FIIS mba hanoloana ny sainan'ny revolisionam-bahoaka amin'ny fihetsiketsehana, ary nametraka an-katerena ireo teny filamatra miandany ara-pivavahana, manevateva ireo fasan'ny kristianina ary mandrava ireo fiangonana sy ireo marika ara-kolontsina tahaka ny sarivongan'ilay poety sady filôzôfy Abul Alaa al-Maarri, izay fantatra tamin'ny tsikerany amin'ny finoanoam-poana ara-pivavahana sy ny fitompoan-teny fatratra. Niteraka fahatezerana teo amin'ny mpikatroka izany, izay nahita ny revolision'izy ireo nosolokin'ireo vondrona izay tsy hahasolon-tena ny fahasamihafan'ny firenena sy ny fitakiam-bahoaka mihitsy.
Lasibatr'ireo fanafihana sy fandrahonana hatrany i Nofal noho ny fijoroany manoloana ny FIIS. Efa voatifitra teo anoloan'ny foiben'ny FIIS mihitsy izy, saingy velon'aina soa aman-tsara ihany noho ny fanampian'ny rahavaviny.
Tsy maninona iza nihatra, te-hitoetra aho. te-honina eto amin'ny tanànanko aho, tsy tiako handramboka izany ny hafa. Tsara ny fahazotoana mitolona an-tserasera, saingy misy ny asa tsy maintsy vitaina eny an-kianja ary tsy maintsy misy olona maromaro mijanona eto an-tanàna hiandraikitra izany.
Nahasarika ny maro ny herim-pon'i Nofal ary niteraka firaisankina miaraka amin'ny “vehivavy-tokana manao fihetsiketsehana” tao amin'ny firenena, indrindra avy amin'ireo andriambavy-lanitra. Mpikatroka Mayan Atassi nanoratra hoe:
Mila indrindra ity loharanon-kery sy herim-po ananan'ny vehivavy ity aho androany. Mirary soa anao, Suad Nofal!”
Mihazona ny afisiny, feno hafatra, miloko sy misy sarisary i Nofal, ho fampahatsiahivana ny tolona Syriana, sy ny tolony manokana.
“Niaraka tamiko foana ireto sora-baventy ireto, nanome hery ahy izy ireo. Mampahatsiahy ahy ny maha-zava-dehibe ny tokony hanohizana izay efa natao. Mandra-pahazoantsika ny fahalalahana.”
Afisin'i Suad Nofal, ho firaisankina amin'ireo vahoaka Kristianina, potiky ny FIIS. Sary: pejy FAcebook-n'i Suad Nofal